Itoobiya: Ciidamada badda aan sameeysanayo waxay ka howl galayan badda Hindiya iyo badda cas - BBC News Somali
Itoobiya: Ciidamada badda aan sameeysanayo waxay ka howl galayan badda Hindiya iyo badda cas
21 Abriil 2019
Xigashada Sawirka, FANA
Sarreeya Guud Birhaanuu Julaa
Itoobiya ayaa sheegtay iney ciidamadeeda badda ee burburay 1990-yadii ay 27 sano kaddib dib u soo celineyso dhawaanna shaqadooda billaabayaan.
Sarreeya Guud Birhaanuu Julaa oo wareysi ay la yeelatay wargeyska 'Addis Zemen' oo afka dowladda ku hadlo ayaa sheegay "iney dolwadda Itoobiya ay ka shaqeyn hayso sidi ay u dhisna lahayd ciidama bad oo adag."
"Ciidamada badda ee ay Itoobiya dhisaneysana waxay noqon doonaan ayuu yiri kuwa tababar casri ah leh isla-markaana qalabki ugu dambeeyey ee ciidamada badda adeegsada."
Abaanduula ku xigeenka ciidmada Itoobiya oo soo xigtay hadal horay uga soo yeeray xisbiga talada dalka Itoobiya haya oo lagu soo daabacay bogga ay baraha bulshada ku leeyihiin wuxuu yiri:
"Waa inaan muujinnaa sameynta siyaasadeed ee ay Itoobiya ku leedahay dhinaca badda. Waddama badan ayaa meela fogfog ka imanaya si ay badaha dariska nala ah ay saameyn ugu yeeshaan oo saldhigyo ka sameeysto. Annagu waxaan nahay waddan facweyn oo ay ku nool yihiin shacab ka badan 100 milyan. Marka ma jiri karto sabab aan bad la'aan u noqon karno".
Itoobiya waxa ay sidoo kale leedahay machad lagu tababaro xirfadlayaasha badda, waxaana sanad kasta kasoo baxa 500 oo qof oo leh xirfado kala duwan, waxaana la qorsheynayaa in tiradaas la gaarsiiyo 1,000 qof.
Maxaa ugu wacan saldhigyada badan ee ciidamada shisheeye ee Jabuuti laga furayo?
In ciidamo meel eber ah laga soo dhiso, gaar ahaan kuwa badda waa shaqo aad u culus, una baahan dhaqaale badan.
Madaxweynaha Faransiiska Emannuel Macron maruu booqasha ku tagay dalka Itoobiya wuxuu sheegay in ciidanka Badda uu Faransiiska u dhisayo dowladda Itoobiya.
Wuxuuna Makron uu Itoobiya lasaxiixday heshiis ku kacaya Malaayiin doollar ah oo dhanka melleteriga ah gaar ahaan in Faransiisku uu gacan ka geysto dhismaha ciidamada Badda oo ay Itoobiya yeelaneyso 29 sano kaddib.
Qorshaha Itoobiya ay ciidamada badda ku sameysaneyso halkuu maraya?
Sida uu sheegay Sareeya guud Birhaanu Julaa, "inaga oo kala tashanyeno waddamada aan saaxibbada nahay waxaan dhammeeystirnay qaab dhismeedka ay ciidamada badda ee Itoobiya lahaanayaan, waxaana muddo gaaban loo gudan galay meel marinta qorshahaasi."
Ciddamada Badda Itoobiyana waxay saldhigyo ku yeelanayaan ayuu yiri badaha caalamiga ee Badda Cas iyo Badda Hindiya.
Saraakiil kale oo dhanka badda ah oo Itoobiya u qalin jabisay
Soomaaliya gorgortan ma ka geli doontaa arinta xuduudda badda?
"Waxaan dhisaynaa ciidammo xoog badan oo badeed, kuwaas oo ugu xoog badan Afrika". ayuu yiri ra'isal wasaaruhu.
Xigashada Sawirka, OPM/BORKENA
Ra'sal wasaaraha iyo Abaanduulaha Ciidamada Itoobiya
Ra'isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa marki ugu horreysay bishi June ee kal hore ku dhawaaqay inuu dalkiisu doonayo inuu dhisto ciidamo bad, isaga oo ka dhawaajiyey inuu xiriir arrintaasi ku saabsan uu kala yeeshay Asmara iyo Muqdisho xiriir dhaqale iyo mid amniba ay dalalkaasi yeelanayaan.
Taariikhda ciadamada badda Itoobiya
Xukumaddi boqor sillaase ee ka riimineysay dalka Itoobiya ayaa 1958 aasaastay ciidamada badda ee ugu horreeyey Itoobiya, xilligaasi oo ay waddamada Afrika intooda badan ku jiraan gacnta guumeysiga, waxayna ciidamada badda Itoobiya ay noqdeen ciidamada badda ugu xoog badnaa qaaradda Arfika.
Xigashada Sawirka, LAHAANSHAHA SAWIRKAIMPERIAL WAR MUSEUM
H H Commodore Prince Alexander Desta waxa uu ahaa ku xigeenka taliyaha ciidammada badda ee boqortooyadii Itoobiya 1971
Taliyaha ciidamada badda ee Itoobiyana wuxuu tababarkiisa ku soo qaatay dugsi ciidamada badda ay leeyihiin oo ku yaalla dalka mareykanka.
Xigashada Sawirka, TASFA NEWS
ETHIOPIAN NAVY 1955-1990
Qoys si kadis ah ku ogaaday in ay qaraabo yihiin madaxweynaha Maraykanka
Muxuu ururka "Dowladda Islaamka" ku diidan yahay Xamaas?
Maxay tahay sababta magaalada Diridhaba dowladda dhexe loo hoos geeyey?
Jabhadda TPLF miyay soo rogaal celisay?